Kalemci Ihhotela 3 * (Turkey / Marmaris) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Marmaris - omunye ethandwa kakhulu iholidi zokungcebeleka Turkey. Idolobha elihle eduze Bodrum, Kufakwe bay obunokuthula emngceleni ngamazwe aseMedithera nase ezilwandle Aegean, izivakashi eziningi futhi ngenxa yalokho kukhona evuthiwe uchungechunge lwamahhotela.
Ukukhetha hhotela Njalo kuwusizo ayejwayele imininingwane kanye nokubuyekeza of nezinye izihambi. Lesi sihloko liqukethe ulwazi mayelana Kalemci Ihhotela ( «Kalemchi").
Air egcwele Marmaris flavour uphayini cypresses ezikhula emaceleni ale ntaba eduze, zikagamthilini kanye ulwandle efudumele. Kalemci Ihhotela itholakala usebe lolwandle phakathi olwandle aluhlaza namagquma eziluhlaza nasezintabeni eziphakeme.
Idolobha echwebeni olunothile enombono seziqhingi ezintathu lakhiwa lapha engamakhulu ayisithupha ngaphambi kwesikhathi sethu esivamile, futhi yayibizwa ngokuthi ke Physkos.
Manje endaweni yayo kumi Marmaris esine Ezimakethe zase ezimibalabala, zikagamthilini ezithelo, orange-Ashera, izihlahla zesundu oluhlaza, amathilomu ezingenakubalwa, zokudlela kanye nezikhungo ukuzijabulisa.
imisebenzi Eduze sezindiza International ( "Dalaman"), ungase futhi enze uhambo IGrisi okukhulunywa ngayo isikebhe eya esiqhingini eRodu, futhi amabhasi ushiye nsuku zonke ezinye izindawo e-Turkey.
Marmaris Harbor - kwekulu kolwandle Aegean, ungafaka lapha ayinkulungwane imikhumbi. Akumangazi ukuthi lapha maphakathi yachting eTurkey uya yachtsmen ezivela emhlabeni wonke.
Izindawo eziningi kule nhlonhlo kuyinto inqolobane imvelo, futhi yemvelo engafani Marmaris ivikelwe isimo (abahambi abaningi bayamangala ukubona olunezinombolo amasundu). Esikhathini bay evikelwe wakha kuyo ehlobo ikhanda weRiphabhulikhi Turkish.
Kule ndawo, isimo sezulu njalo okuhle - elishisayo (+ 35-38 C ngo-July) ezimanzi ebusika afudumele (10 ° C ngo-January). Intwasahlobo nekwindla - kuba sikhathi esijabulisayo lapho izinga lokushisa komoya 25 ° C no-kolwandle lifudumeza kuze kufinyelele 20 ° C ngo-May 28 ° C ngo-September.
Izivakashi abaphumule Kalemci Ihhotela, Marmaris uphawu microclimate ahlukile ivaliwe ekhoneni imimoya, ke akahlukile nomswakama eliphezulu kakhulu (35%) kanye emoyeni enempilo egcwele amafutha abalulekile, uphayini, zikagamthilini kanye cypresses.
Ngenxa bay avaliwe kolwandle azikho kwamagagasi aphakeme, entry bushelelezi emanzini ngaphandle kokuthatha ikhefu futhi amatshe abukhali ogwini.
Ogwini, kunezindlela eziningi amabhishi kahle amahhotela ahlukahlukene. Ungakwazi ukubhukuda noma yisiphi sazo, uma bekhokha khona imali yokubhalisa noma ukuthenga isiphuzo kubha eseduze (3-10 lire). Khumbula ukuthi amabhishi abaningi abanawo umphefumulo.
Eduze Kalemci Ihhotela 3 * hhotela edolobheni itshana-isihlabathi lolwandle (150 m), ifakwe zangasese namakamelo kokushintsha. Izambulela futhi emphemeni izihlalo ikhokhwe. lolwandle Private ehhotela lapho.
Beach kamasipala engahlanzekile kakhulu, izivakashi eziningi iya ku Icmeler amabhishi (7 km kusuka Marmaris), nasenyakatho, inhlonhlo ye-Jennet, kanye ethekwini Turunç futhi Kumlubuka.
Long ukuvakasha amahle lolwandle ezinkulu endaweni Uzunyan (endleleni phakathi Marmaris futhi Icmeler).
Esikhathini bay Bonzhuk izivakashi nethuba hhayi kuphela ukuba ageze, ukuthamela ilanga, kodwa futhi ukubuka oshaka.
Enye famous beach kuyinto edolobhaneni Orhan - ke idume scythe ngaphansi kwamanzi, lapho ibanga amamitha 600 (ie ungavele ukuhamba phezu kwamanzi, lapho ukujula ifinyelela efinyelela emaqakaleni).
The best kubhekwe Cleopatra lolwandle esiqhingini Sedir (isihlabathi eyingqayizivele walethwa Queen waseGibhithe lasendulo).
Ngo Marmaris nasezindaweni ezizungezile has eziningi ezikhangayo:
I inqaba (XIV leminyaka, iminyuziyamu amabili).
Old Town (caravanserai kwekhulu XVI).
Cleopatra Isiqhingi (ikakhulukazi labo akhiwa isihlabathi lasendulo ezimhlophe).
Amanxiwa lasendulo zaseGrisi-Laokidiya EHiyerapholi (Cleopatra zokugeza, kodwa leyo ndawo yeshashalazi, Nethempeli Apollo).
Amanxiwa omuzi wasendulo wamaRoma wase-Efesu (endaweni yokuphumula ye Ioanna Bogoslova uMariya).
Aqua Dream Water Park kanye Atlantis.
Ezokuzijabulisa eziyinkimbinkimbi "Netsel Marina" (izitolo, izindawo zokudla, yamabhayisikobho).
"Amabha Street" Marmaris (kuma-nightclub, zokudla, ema-disco).
Pamukalle (amahora ambalwa kusuka Marmaris) - imithombo yamanzi amtoti ashisayo, sizungezwe elimhlophe-lime amagquma Umumo ezihlotshisiwe.
Turtle Island Dalyan (eduze Pamukkale).
Famous yacht Cruises E-Aegean Sea ( "Azure Kwekuheha") iqala Marmaris, futhi ngo-May, lapha beze amatilosi phambili international ngomkhumbi Regatta.
Izivakashi ukuhlala Kalemci Ihhotela, ingakwazi ukusebenza zonke ezikhangayo ukuthi ayatholakala Marmaris.
Kalemci Ihhotela 3 * itholakala km 90 kusuka "Dalaman" Isikhumulo sezindiza 1.5 km maphakathi Marmaris.
It elakhiwa ngo-1990, futhi kufakwe 92 amakamelo okujwayelekile (16 sq.m. Ngezinye 203) futhi 8 amakamelo umndeni (30 m., Kubantu 4). Abasebenzi ukhuluma isiNgisi nesiJalimane, kukhona umlawuli okhuluma isiRashiya. amakhadi ezamukelwe Visa kanye Master Card.
Ihhotela has ngamakheshi, 2 zokudla (main futhi a la Carte), 3 nemishayo, ukubhukuda ongaphandle pool (350 m), kanye indawo yokubhukuda yezingane (5 m), Khokha ephephile edilini lomshado, igumbi game, ukuqina isikhungo, igumbi TV , sauna, table tennis kanye amabhiliyade.
Emva nokuvuselelwa kwazo ihhotela uye wasiphakamisela stardom yakhe. Manje ngokuthi Kalemci Ihhotela 4 *. Photo ngezansi Kusinikeza nethuba lokucabangela ukubukeka kwayo yonke indawo isakhiwo.
amasevisi yokuwasha, massage therapist, Udokotela onguchwepheshe.
Amakamelo Kalemci Ihhotela (Marmaris) abe kuvulandi, isiqandisi ezincane, i-TV (2 iziteshi Russian yamemezela, kodwa ezinye izivakashi bathi asikho nesisodwa), ucingo kanye air conditioning (ukuhlukaniswa). On the tile phansi.
Ngesicelo wekhasimende i Embhedeni owenezelwe.
Inthanethi ngenkokhelo ($ 5 ngosuku) futhi itholakala kuphela endaweni yokwamukela izivakashi. Safe zibiza u- $ 25 izinsuku eziyi-7.
Zonke amakamelo ehhotela efakwe nekamelo lokugezela ne okugeza, ngigeza futhi hairdryer.
I Kalemci Ihhotela 4 * (ejwayelekile) babebatholela lilungisiwe, yonke imishini esebenza khona, kodwa kusihlwa kubalulekile ukulinda amanzi ashisayo uya.
Ihhotela ihlelwe HB ukudla (ibhulakufesi nesidlo sakusihlwa), okungukuthi 'lezitsha "ngesidlo sasekuseni futhi dinner, futhi kwasemini wakhonza ngemali eyengeziwe zokudlela yehhotela ezingamabhangqa nemigoqo.
HB imenyu ejwayelekile:
Ulethisi (ukhukhamba ikakhulukazi utamatisi, uthathe ngezindlela ezahlukene).
Inyama (ngokuvamile inkukhu, ngezinye izikhathi yenkomo sauce).
amazambane athosiwe nelayisi abilisiwe.
Izithelo (ikhabe, apula, amawolintshi, plums, cherry kanye amapetshisi).
zokudla eziningi kanye nezindawo zokucima ukoma Marmaris ukhonza kwasolwandle futhi ezihlukahlukene cuisine Turkish.
Kuwufanele zama lezi imisebenzi yobuciko Culinary njengoba kyufta (inyama isobho), kebab, dolma (eyayigcwele amahlamvu yamagilebhisi), isitshalo seqanda eyayigcwele amaswidi ezidumile Turkish.
Yasebusuku ngasolwandle edolobheni iyasebenza kakhulu. Ngo disco ehlukahlukene amakilabhu, ikakhulukazi Ibha Street, ungawujikijeli amaqembu, imincintiswano kanye nemibukiso (wenziwa kuhlanganise edumile isisu umdanso).
Abaphumule Marmaris, ungaya ku-safari ku isikwele emabhayisikili noma engibaziyo ukubhukuda isikebhe emifuleni entabeni noma ulwandle ezikebheni kanye jet eqhweni, hamba ku hambo lokuya edolobheni lasendulo futhi ujabulele okunye ukuzijabulisa ukuthi Turkey idume. Amahhotela (kuhlanganisiwe Kalemci Ihhotela) ahlinzeke izithombe amasevisi. Kodwa amahhotela "Kalemchi" okuyilo ukuyisa phandle aerobics amanzi ekuseni polo yamanzi ntambama.
Ngokuyinhloko, umsebenzi Animators lwasendaweni ukuthatha ehhotela izivakashi ema-disco in the zokudlela edolobheni, futhi abuyise (Shuttle khulula). ukuzijabulisa Wezingane ehhotela akuyona ihlelwe.
Uhambo ethandwa kakhulu - uhambo Pamukkale ($ 60 umuntu ngamunye) kanye esiqhingini Cleopatra. Phakathi kolwandle hambo zezivakashi amatheku amahle nge crystal amanzi olwandle ecacile, umbala esesikhundleni amathoni ayisishiyagalolunye.
Kusihlwa ungakwazi ukubheka "ukucula" emithonjeni enkabeni yedolobha noma ukuthatha ukungcebeleka eduze ukuvakasha enhle, lapho endaweni cafe ngomculo bukhoma.
izivakashi eziningi baxoxa ngokuhlangenwe nakho kwabo lapho ukuhlala Kalemci Ihhotela. Izibuyekezo zihlukile - okuhle nokubi. Ngezindlela eziningi, balinganisela kuncike isimo nobunjalo abantu, kodwa kukhona nokubona umgomo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ihhotela asifanele iholidi nezingane - akukho izithombe izingane, hhayi isevisi nokugada nokuzijabulisa club.
Ihhotela akulona ngiphephile izivakashi amadala. Izivakashi main - kuba intsha abakhuthalele ubungazwa nemigoqo.
Phakathi nakho okukhuthazayo kungathiwa elandelayo:
Amakamelo Kalemci Ihhotela (Marmaris) abangu lilungisiwe, yonke impahla yasendlini nokunakekela amapayipi zisesimweni esifanele.
Elikhulu futhi ihlanzekile indawo yokubhukuda, kukhona okuningi sunbeds.
Izakhamuzi zedolobha zinhle Russian.
A uhambo olufushane ogwini yedolobha.
Eduze kukhona nezitolo ezinkulu ezinhle, izitolo nezindawo zokudlela ezinhle.
izivakashi eziningi Russian - ungathola njalo inkampani ethokoza
Eceleni hhotela esitobhini edolobheni ibhasi, lapho ungakwazi ngokushesha uthole phakathi nendawo.
Ukukhetha elikhulu amabhishi ahlukahlukene futhi emuhle.
ukudla okumnandi, eziningi imifino nezithelo.
Kukhona futhi kungiphathe kabi ukungasabeli kahle ngokuphila esikhathini Kalemci Ihhotela 4 * (Marmaris). Izibuyekezo ngamaphutha ihhotela:
Air conditioning itholakala kuphela emakamelweni kwamanye amakamelo ehhotela (yokudlela, reception, imihubhe nokunye) kuyinto stuffy kakhulu, futhi nje akakwazi ukuphefumula.
Elevator akukho conditioning air futhi ihamba kancane kakhulu, eziningi kangaka ziyahamba izitebhisi).
Amakamelo bahlanza, kodwa uma ushiya ithiphu embhedeni (3 lira).
Ezinye izivakashi uthi sengqondo esibi Russian (abasebenzi kusolakala abazange baqonde lapho abantu bethu ozama ukukusho ngesiNgisi).
Naphezu kweqiniso lokuthi ukukhangisa yehhotela Setha ejimini, kodwa empeleni akulona.
A khulula kamasipala lolwandle ulwandle ezingcolile.
Uya eholidini e Marmaris nokuhlela ukuze uhlale ehhotela "Kalemchi" funda izincomo abahambi ayoliswe:
Akunjalo ngempela ashintshanise amaRandi (euro). Lyra uzodinga ngebhasi noma itekisi, futhi noma yiziphi izimpahla ungakwazi ukuthenga ezitolo zendawo ngamaRandi.
On zonke izimakethe futhi ezitolo kwakufanele behlise amanani, kanye nokunciphisa ngenani abalifunayo kathathu kusukela ekuqaleni.
Ihhotela "Kalemchi" kangcono ukuthatha ekamelweni izitezi, ngenxa zommbila kancane futhi stuffy babe izikhathi eziningana ngosuku ukusebenzisa izitebhisi.
Lapho ekhetha amafulethi engaqondiswa kuphela lokho phansi ukuthi akuphi, njengoba bonke ngendlela efana ncamashí.
Kuwufanele ukuthatha isichazamazwi English-Russian (ingalandwa ocingweni) njengoba abasebenzi ngokuvamile akakhulumi ngesiRashiya.
Letha flash drive izincwadi, amabhayisikobho nemidlalo, njengoba i-Internet kuphela endaweni yokwamukela izivakashi, kanye nokufinyelela izindleko amadola amahlanu ngosuku.
Thatha ithawula okugeza ngenxa izinombolo ezenza engenakwenzeka, futhi ungalilahli out ichibi.
Bus-dolmushe (amatekisi omhlophe) imizuzu embalwa futhi 2.5 lira umuntu ngamunye ungathola Icmeler (kwesinye isigodi izivakashi eseduze) - kukhona ulwandle kucacile kakhulu, futhi ngisho nezinto ezincanyana izinhlanzi ziyatshuza, kodwa amabhishi akuzona njengoba ophithizelayo (nakuba izambulela futhi ilanga loungers yena uphinde wathweswa icala).
Ngo Icmeler kukhona lolwandle obukhethekile sunbeds mahhala ehhotela izivakashi "Kalemchi". Kumele sithole ngo "Nirvana Beach", hamba izitebhisi futhi uhambe kwesokunxele kuze kube sekupheleni.
Ngo Marmaris lapho izimboni siqu womshini lesikhumba, ngakho kukhona Ukukhetha enkulu lesikhumba izimpahla, futhi intengo kuyabiza ngaphezu kwezinye imizi Turkey.
Kusukela imikhiqizo zendawo kakhulu uju izivakashi uthi ulwe. It has yasekuqaleni zikaphayini iphunga nokunambitheka okukhulu.
Kuyadingeka njalo umuthi wokuvikela isikhumba elangeni, ikakhulukazi ngesikhathi uhambo kanye nokuvakashela izindawo.
zokuzivocavoca Iningi kanengi emahhotela aphambili. izivakashi eziningi zithanda ukudlala imidlalo ehholo lehhotela "Elegance" (40 lira umuntu ngamunye 1 ukuvakashelwa).
Kalemci Ihhotela kufanelekile isihambi isabelomali futhi yakhelwe abantu asebenzayo abantu asebeqinile abasha. Kulabo abakhetha iholidi onokuthula okuphumuzayo, ngeke sisondela edolobhaneni elingumakhelwane Icmeler.
Ihhotela Les Pyramides 3 *
DoubleTree by Hilton Resort & Spa Indawo Marjan Isiqhingi 5 * (United Arab Emirates / Ras al-Khaimah): Izibuyekezo
Ibhajethi ehhotela eduze edolobhaneni Kemer: Sumela Garden 3 *
Royalton Ihhotela 2 * (UAE / Dubai): ngezibuyekezo nezithombe
Ngezikhawu ejwayelekile. Kuyini ngezikhawu isici
Hermaphrodite - indoda noma owesifazane?
Yini Akunangqondo e umculo, izincwadi, ubuciko kanye izakhiwo?
Tatyany Larinoy Isici. Ukubona Tatyana Larina
Alena Shishkova: ukuphakama, isisindo, biography okufutshane
Izidakamizwa "Interferon" e ampoules
"Rektaktiv" (ikhandlela): yokusetshenziswa, ngempela
Uyini ububanzi kwezinhlobo eziphilayo: definition. Isakhiwo ezahlukene kwezinhlobo
Ukufundisa ngezocansi kwentsha: izindlela, izinkinga, izincwadi
Roe - Ingelosi Eyinhloko ngesineke Gingerbread. Umlando, iresiphi yendabuko, imidwebo